पहिलो र महत्वपूर्ण जित पछि के भन्छन त जितका नायक रोहित र कप्तान पारस खड्का ! - Hamro Nepal Cricket
पहिलो र महत्वपूर्ण जित पछि के भन्छन त जितका नायक रोहित र कप्तान पारस खड्का !
हाम्रो नेपाल क्रिकेट , काठमाडौं
हंगकंग बिरुद्दको जित पछी के भन्छन त कप्तान र रोहित पौडेल !
आफ्नो चौथौ खेलमा नेपाली टोली हंगकंग बिरुद्द उत्रिएको हो । टस हार्दै नेपालले पहिले फिल्डिंगको निम्तो पायो । हंगकंगलाइ नेपालले १५३ रनमा समेट्यो ।
सुरुवात ठिकै गरेको हंगकंगलाइ सुरुमा मिडियम पेसर र बिचमा स्पिनरहरुले दुख दिए । हंगकंगको तर्फबाट निजाकत खानले ४७ बाहेक अरु कुनै ब्याटसम्यानले ३० रन भन्दा बढी बनाउन सकेनन् ।
हंगकंगले ४८.२ ओभर खेल्दा उसको सबै विकेट जान पुगेको हो । नेपालका लागि सन्दिप लामिछानेले तिन विकेट , बसन्तले दुई विकेट र कारणले दुई विकेट लिए ।
१५४ रनको चुनौती खेदाएको नेपालको सुरुवात ताबद्तोड़ भएको थियो । ४० रनमा शुन्य विकेट गुमाएको नेपालको ६६ रनमा पाच विकेट गएको थियो ।
अन्तिम ब्याट्सम्यान रोहित र सोमपाल क्रिजमा थिए । यी दुई युवा ब्याट्सम्यानले छैठौ विकेटको लागि ८९ रन जोड्दै उत्कृस्ट प्रदर्शन गरे ।
सोमपालले ४० बलको सामना गर्दै चार चौकाको मद्दतले ३७ रन बनाए भने रोहितले ८६ बलमा ४८ रन जोडे ।यी दुइको अतिनै माह्त्वपूर्ण साझेदारीको बदौलत नेपाल पाच विकेटले बिजयी हुन पुगेको हो ।
खेल पश्चात के भन्छन त रोहित र पारस ?
पहिलो प्रश्न रोहितलाई | आजको हिरो हुदा कस्तो लागिरहेको छ ?
-धेरै खुसी छु , टिमको प्रदर्शनमा !, अब अगाडीका खेलहरुमा राम्रो प्रदर्शन गर्नुछ ।
पारसलाई ! ६६-५ बाट , जितिन्छ जस्तो लागेको थियो ?, हङकङको लागि हार्ट ब्रेक भयो , यश बिषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामीलाई थाहा थियो , प्रतियोगितामा उक्लने , ओरालिने प्रक्रिया भैरहन्छ ! हामीले जहिले आफ्नो प्रदर्शन राम्रो , लगनका साथ् गरेका हौ । आज विकेट सोचेजस्तो भएन । हामीले टस हारेर राम्रै भएछ , टस जितेको भए हामीले ब्याटिंग रोज्ने थियौ ! यहा पिचले रंग बदलेको हो । हाम्रा बलरहरूले राम्रो प्रदर्शन गरे ।
प्राय यस मैदानमा , पहिले ब्याटिंग गर्ने टोलीले जित्ने गरेको यस मैदानमा , हजुरले कस्तो रणनीति अपनाउनु भयो ?
-(पारस भन्छन ) हामीले दिसिप्लिंड बलिंग गरेका थियौ । फास्ट बलरहरुले सुरुमा राम्रो फाउन्डेसन दिए , त्यसपछी स्पिनर हरुले राम्रो भूमिका निभाए । ब्याटिंगको कुरा गर्दा , हाम्रो सुरुवात राम्रो भएको थियो , बिचमा ब्याटिंग मिनी कोल्याप्स हुन पुग्यो ! त्यसपछी युवा ब्याट्सम्यान रोहित र सोमपाल;ले राम्रो ब्याटिंग गर्दै हामीलाइ जिताए ।
सुपर सिक्स र विश्वकप क्वालिफिकेसन अब पहुच भन्दा बाहिर गैसकेको छ , यो जितले नेपाली फ्यानहरुमा के अर्थ राख्छ?
-(रोहितले भने ) सबै नेपाली समर्थक हरुका लागि यो खुशीको खबर हो , हामी अब सातौ र आठौ स्थानलाई हेर्दैछौ ! अब अर्को खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने छौ !
-(पारसले भने ) हामी जतिसक्दो माथि रहन चाहन्छौ , हामी संग अझै एउटा खेल बाकी छ , सातौ र आठौ स्थानको लागि , हामीले आज गरे जस्तो प्रदर्शन दोहोर्यौन सकेउ भने हामीले पक्कै जित्न सक्ने छौ !
यस प्रतियोगितामा नेपालको कुनै कुनै प्रदर्शन उत्कृस्ट रहयो , अब ठुला र बलिया टोलीलाइ च्यालेन्ज गर्न सक्छौ जस्तो लागेको छ ?
-(पारसले भने ) सबै मौकाको कुरा हो ! हामीले राम्रा टिमहरु संग खेल्न पायौ भने हामीसंग राम्रो गर्ने पोटेन्सियल छ । कन्डिसन संग बानी हुने हो भने , र यस्तो लेबलको क्रिकेट धेरै खेल्ने हो भने हामीले अवस्य राम्रो गर्ने छौ !
२०१४ मा हामीले टि-२० विश्वकप पनि खेलेका हौ , हामीले राम्रो प्रदर्शन गरेका थियौ , अब हामीले हामीलाई एकदिवसीय साइडको लागि पनि आफुलाई तयार गर्नेछौ ! जति सक्नु पर्ने , हामीले त्यति गर्न सकिरहेका छैनौ !
नामिबियामा डिभिजन दुई खेलेर आउदा हामी केहि उत्कृस्ट रास्ट्र बिरुद्द प्रतिस्पर्धा गर्दै छौ ! यो सबै मौका कै कुरा हो , हामीलाई मौका दिने हो भने हामी संग छ्यमता नभएको हैन! हामी राम्रो गर्न सक्छौ !
नेपालले प्ले अफको आफ्नो खेल पपुवा न्यु गिनी संग मार्च १५ मा खेल्दै छ !
Rabada wins Man of the Match, but may lose the Series
भारतको सहज जित, श्रीलंका ६ विकेटले पराजित